Thursday June 25, 2020 - 18:59:11 in Wararka by Mustaf Xuseen
Taliyaha ururka 39 aad qeybta 27 aad ee ciidanka xoogga dalka, Dhamme Maxamed Ibraahim Daa'uud ayaa sheegay in fuliyeen howlgal lagu adkeynayo amniga deegaanada hoos taga degaanka Jawiil ee gobolka Hiiraan.
Waxaa uu intaas ku daray, howlgalka u jeedkiisu yahay in la soo qabto kooxo falal amni daro ka geystay degaanka maalmo ka hor.
Maxkamadda ciidanka ee qeybtaas ayaa dhowaan amar ku siisay saraakiisha in ay soo qabtaan dadka ku howlan waxyeeleynta shacabka isticmaala inta u dhexeysa Beledweyne iyo degaanka Jawiil.
Taliye ku xigeenka guutada 5 aad ee qeybta 27 Korneel Maxamed Cabdi Xasan ayaa sheegay in in ciidanku u taagan yihiin ilaalinta nafta iyo maalka dadka Soomaaliyeed wixii dhibaato ku hayana ay gacan bir ah ku qaban doonaan.
Ra'iisul wasaare Rooble oo guddoomiyey shirka todobaadlaha ah ee Amniga
29/09/2020 - 17:54:47
Taliyaha qeybta 4aad ee ciidamada AMISOM oo gaarey magaaladda Samareeb "Sawirro"
29/09/2020 - 17:52:32